स्वास्थ्य – Pahilo Page
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटर दीपेन्द्र सिंह ऐरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को अलराउण्डरतर्फ शीर्ष १० भित्र पर्न सफल भएका छन् । आईसीसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा ऐरी अलराउन्डरतर्फ १० औं स्थानमा रहेका छन् । ऐरी टी(२० अन्तर्राष्ट्रियमा एक हजार रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी रहेका छन...
पानी हाम्रो स्वास्थका लागि अति नै आवश्यक तत्व हो । त्यसैले विशेषज्ञले हरेक दिन ३ देखि ४ लिटर पानी पिउने सल्लाह दिन्छन् । चिकित्सकका अनुसार खाना खाने क्रममा पानी पिउनु हुँदैन । भोजन गरेको तुरुन्तपछि पानी पिउनाले एसिडिटी, ब्लोटिङजस्ता समस्या हुन सक्छ । जून मानिसले खाना खाएको तुरुन्तपछि पानी पिउँछ, उसलाई विभिन्न समस्या हु...
व्यस्त सहरी जीवनशैलीले मानिसहरूमा तनाव एवं थकान बढाइरहेको छ । यसले छालालाई समेत असर गरिरहेको हुन्छ । तनावको प्रत्यक्ष असर अनुहारमा देखिन्छ जसले डन्डिफोर र छाला चाउरीजस्ता समस्या देखिन्छन् । यो मौसममा चल्ने हावाहुरीले धुलो उडाएर ल्याउने हुँदा अनुहारमा सबैभन्दा पहिला पर्न जान्छ । यस्तो वेला छाला सुक्खा हुने हुन्छ । गर...
कलेजो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । हाम्रो दिनचर्या र भोजनका कारण कलेजोमा समस्या आउन सक्छ । जानौं केही भोजनहरु जसले कलेजो स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ । स्याउको जुस : स्याउको जुस कलेजो स्वस्थ राख्न राम्रो मानिन्छ । साथै यसले तौल घटाउन पनि मद्दत गर्दछ । कागती : कागतीमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन सी हुन...
कफी पिउँदा मुटु रोग लाग्नुको सट्टा जोगाउन सकिने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । कफीको प्रयोगलाई लिएर केही चिकित्सक र सर्वसाधारणमा चिन्ता बढ्दै गइरहेका बेला पछिल्लो अध्ययन सार्वजनिक भएको हो । बिहीबार प्रकाशित तीन ओटा अनुसन्धानका सारअनुसार दैनिक दुईदेखि तीन कप कफी पिउनाले मुटुसम्बन्धी रोग, हृदयघात वा मुटुसम्बन्धी समस्या वा ...
काठमाडाैँ। सामान्यतया गर्भावस्थामा महिलाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने गर्दछ । यो हरेकजसो महिलाहरुमा देखिने समस्या हो । यस्तो किन हुन्छ त ? चिकित्सकहरूका अनुसार, गर्भावस्थामा महिलामा आउने एचसिजी हर्मोनका कारण वाकवाकी र रिंगटा लाग्ने गर्दछ । यो हर्मनलाई ‘प्रेग्नेन्सी हर्मोन’ पनि भन्ने गरिन्छ । अध्ययन अनुसार, गर्भावस्थामा आउने...
तौल बढाउन ब्रेक फास्टमा के खाने ?
काठमाडौँ । आजभोली धेरै मानिसहरू आफ्नो शरीरको कम तौलको बारेमा धेरै चिन्तित छन् । धेरै पातलो हुनु पनि तपाईंको स्वास्थ्यको लागि राम्रो भने होइन । यसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ । जसले चाँडै बिरामी पर्न सक्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति फिट रहनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा तौल राम्ररी बढाउनका...
खुर्सानी सेवन गर्नेलाई मुटुरोगको सम्भावना कम
एजेन्सी । नियमित रुपमा खुर्सानी सेवनले हृदय रोगको सम्भावना कम हुने नयाँ तथ्य फेला परेको छ । चीनको सन यात्सेन विश्वविद्यालय सम्बद्ध नम्बर ८ अस्पतालका प्रोफेसर ह्वाङ हुइको टोलीले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानबाट उक्त कुरा पत्ता लागेको हो । स्वस्थ आहारको लागि खुर्सानी सेवन अत्यावश्यक रहेको ह्वाङको भनाइ छ । नियमित रूपमा खुर्स...
काठमाडौं । स्तन क्यान्सर बढी महिलाहरुमा हुने रोग हो। उक्त रोगका कारण कतिपय महिलाले ज्यानै समेत गुमाउनु परेको छ । स्तन क्यान्सर किन हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्ने ? स्तन क्यान्सर के कारणले हुन्छ ? १५ देखि ३० प्रतिशत स्तन क्यान्सर वंशाणुगत कारणबाट सर्छ भन्ने पनि गरिन्छ । स्तन क्यान्सर भयो भन्दैमा आतिनु हुँदैन । सुरुमा न...
अस्वस्थ खानपानले हृदयाघात बढ्दै
काठमाडौं । मानिसका जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नेपालमा हृदयघातका बिरामी बढिरहेका छन् । अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन रोगका कारक मानिएका छन् । दश वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हृदयघात हुनेको संख्यामा दोब्बर वृद्धि भएको छ । निष्क्रिय जीवनशैली, चिन्ता, युवावस्थामा नै चुरोट, सुर्ती तथा खैनी सेवन र चिल्लो–बोसो ...